I-Seychelles Izilingo ngokuCoca ukutya kwi-Goût de France
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles Izilingo ngokuCoca ukutya kwi-Goût de France
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-Seychelles Izanywa yi-Goût de France
Ummeli wase-France eSeychelles, oHloniphekileyo u-Dominique Mas, umeme uluntu lwase-Seychelles kunye nabatyeleli base-Seychelles ukuba bajoyine imibhiyozo yomnyhadala wamazwe aphesheya we-Goût de France / Good France oza kubanjwa ukusuka nge-14 ukuya ku-Okthobha 22, 2021.
Imithendeleko yomnyhadala iya kwakhela kwimpumelelo yamahlelo adlulileyo omnyhadala waseGoût de France kwihlabathi liphela.
Kulo nyaka izakubonisa iZiko leNtlambo ye-Loire ngelixa libonisa umxholo we-eco-friendly gastronomy.
I-Gout de France iseyeyona nto ibaluleke kakhulu kwilizwe laseFrance kwaye iyabahlonipha bonke abapheki.
Isimemo sidluliselwe kwinkomfa yoonondaba evela kwiNdawo yokuhlala yaseFrance eLa Misère phambi koMlawuli Jikelele weNtengiso yeNdawo Ukhenketho lwaseSeychelles KwiSebe, UNksk Bernadette Willemin. Abapheki abamele amanye amaziko asebenzisanayo kuhlelo lweGoût de France kulo nyaka babekhona kumsitho womsitho.
Ukwazisa umsitho, oHloniphekileyo u-Dominique Mas ukhankanye ukuba le mibhiyozo iza kwakhela kwimpumelelo ye-edlulileyo yomsitho we-Goût de France kwihlabathi liphela, kulo nyaka izakubonisa iZiko le-Loire Valley ngelixa libonisa umbono we-eco-friendly gastronomy .
"Emva kwale minyaka inzima xa ubudlelwane bethu bezentlalo buphazanyiswa ziingxaki zempilo kunye nezoqoqosho, ndiyavuya ukubhiyozela ilifa lethu laseFrance lokupheka kunye nabahlobo bethu baseSeychellois kunye nayo yonke imikhosi yangaphandle yamachwebakazi," utshilo uMmeli Mas. Wongeze wathi, “iGout de France ihleli ingowona msitho ubaluleke kakhulu kwilizwe laseFrance; kodwa ikwanika imbeko kubo bonke abapheki kunye namalungu oluntu olwamkelekileyo athe asokola kakhulu kwezi nyanga zidlulileyo. ” Unozakuzaku uzibophelele ekutyeleleni zonke iivenkile zokutyela ezisibhozo neehotele eziphakamisa imenyu enelebhile eSeychelles. "Ndiyazi ukuba kunokuba kubi emzimbeni wam, kodwa ndifuna ukujoyina bonke abathandi bokutya baseSeychellois kwaye ndibhiyozele kunye nabo inkcubeko yaseFrance kunye nokuqhelekileyo," utshilo uMmeli waseFrance.
Abathandi be-gastronomy entle ejikeleze i-Seychelles bazakuqala ukufumanisa ukutya kwe-Centre-Loire Valley, etyebileyo kwincasa evela kwimveliso efungelwe ekuhlaleni, balindele incasa yetshizi entle, iwayini, kunye neTarte Tatin edumileyo, eyenziwe ngama-apile e-caramelized kunye ngoku yenye yeedessert eyaziwayo eFrance, eyavela kwingingqi ekufutshane yaseSologne kwiminyaka ye-1880.
UNkosikazi Willemin ukwamnkele ukuqala kwakhona kwe Goût de France esithi ukubuyela kwezi ziganeko kwikhalenda yase Seychelles kubuyisela ukuzithemba kwelizwe ekuvuseleleni ishishini lethu lezokhenketho.
“Siyavuya ukukwazi ukunika inkxaso yethu kwindlu yozakuzo yaseFrance kwaye sijoyine imibhiyozo yalo nyaka iGoût de France. Emva konyaka wokungaqiniseki, izehlo ezinje ngeGout de France zisa imitha yokukhanya kwikamva leshishini lethu. I-Gastronomy, ngakumbi ukutya okumnandi, yinto ekwabelwana ngayo kwaye ngokuqinisekileyo iyinxalenye ebalulekileyo yokufunyanwa kunye namava endawo esiya kuyo, utshilo uNkskz. Willemin.
Ukulandela inkomfa yoonondaba, iindwendwe kunye nabapapashi bathathe iiswidi ezahlukeneyo eziza kubonelelwa kwezinye zeeresityu eziyinxalenye yomsitho eSeychelles.
IGoût de France / iFrance elungileyo ikhunjulwa nge-Matshi 20 minyaka le. Ngokukodwa kulo nyaka, umsitho uza kubanjwa kule-Okthobha. Ezi ndawo zokutyela kunye neehotele ziya kuphakamisa iimenyu ezikhethekileyo ukusuka nge-14 ukuya kwi-Okthobha 22, 2021: Club Med Ste Anne, Constance Ephelia, Constance Lemuria, Delplace, l'Escale, Hilton Northolme, Maia kunye neMango House.